Koowheel Electric skeidgareeyo Quick Start Guide - Jomo Technology Co., Ltd
Talooyin nalalka Remote :
Tilmaame 1.Charge noqon doontaa marka amraya
2.Battery iftiinka iyo tilmaame Direction on waxay ka dhigan tahay waxa uu ku xiran
3.BLUE ka dhigan tahay batari waa RED sare ka dhigan tahay batari low
tilmaame 4.Direction jeedin RED markii beddeli
1. Ku rakib batteriga si sax ah, iyo boolal maroojin
2.Turn on ugu horeysay ee Remote ka dibna noqda guddiga in ay ku xidhmaan.
3. loosoo Forward dardargelinta, jiid Back for Fariin xoog.
4. Tilmaamayaasha batari skeidgareeyo, 4 nalalka on hab 100%,
3. Lights on hab 75%, 2 nalalka ka dhigan tahay 50%, 1 iftiin ka dhigan tahay 20% bidix.
Your guddiga Koowheel uu leeyahay awood badan. Raac talooyinkan si loo hubiyo in waayo-aragnimo ah oo saaran gaadiid ammaan ah:
Dhaqaaq button ee isabdal yar.
Ka dhig mowqifka ballaaran sabuuradda,
Ka dhig xarunta hooseeyo ee cuf.
Horey isu soo qaad marka hi.
Lulaa gadaal markii ku istaago.
MAR xidho koofiyad.
Raadi meel furan, guri la nadiif ah
Sallaxa waayo, Waxaad faraskaaga ku fuushaa ugu horeysay.
Read digniino ku saabsan skeidgareeyo iyo bilowga ah ee buugan.
QALABKA KALE BADBAADINTA weyn lagu talinayaa.
Eedayn Board iyo Change Battery baakada
Light on xeedho noqon doonaa RED markii amraya, in CAGAARAN jeedin ka dib markii si buuxda loo soo oogay. Beddel pack batteriga haddii aad amar ku bixiyay in mid ka mid ah oo dheeraad ah.
Had iyo jeer xasuuso in la adkeeyo boolal ah.
Fiiro gaar ah: Haddii batari kaalinta wakhti dheer, waxay u baahan yihiin in si buuxda loo soo eedeeyay, ka dibna buuxsameen bishiiba mar.
1. Hubi xaaladda giraangiraha u hubiyo in si isku bedbedeli doono si xor ah ka hor inta uusan ku fuushaa kasta Hubi baabuur oo giraangirihiina si loo hubiyo in dhammaan qaybaha ku Xididaystay adkeeyay.
Ha kortaan guddiga haddii aad maqli qaylada kasta oo aan caadi ahayn ka wheel ama motor saa'idka
2. Mar walba ku kaydi guddoonka meelo qalalan iyo hawo.
Ka dhig ka fog jeer qoyan si looga fogaado waxyeelo ay ku loox PCB iyo batari.
3. Isticmaal oo keliya Koowheel xeedho. saxan kale laheyn waxay keeni kartaa arrimaha ammaanka.
Battery waa in had iyo jeer ku hay meelo heerkulka hoos degrees 60Celsius.
Eedayn batteriga 2-3 bilood kasta marka bidix la isticmaalin muddo dheer si looga fogaado dhaawac joogta ah.
Si buuxda ka qaadaan batteriga loo isticmaalo-markii ugu horeysay ee.
Ka dhig deegaanka xukun engegan oo nadiif ah, hubi in dekedda ku amraya qalalan yahay ka hor inta kharash kasta.
Marna ha ka tegin guddiga joogin halka ku amraya
1. Isticmaal oo keliya meelaha asalka for guddiga si looga fogaado dhibaatooyin ah xagga ammaanka.
2. Hel yaqaana xaaladaha kala jejebiyey oo aad u hubiso in la waxqabadka Fariin xoog kaamil ah.
3. Oil saa'idka si joogto ah
4. bilowga ah waa inay fuulaan guddiga si taxadir leh in wadada a dusha siman.
5. Iska ilaali wadada qoyan iyo in ka badan-socoto.
Skeidgareeyo Electric * 1 Battery * 1
User Buugga * 1 xeedho * 1
AC xadhig awood * 1
Damaanad XADDIDAN :
guddiga Koowheel daboolo damaanad hal sano ah soo saaraha ee USA, damaanad labadii sano ee soo saaraha ee Europe in daboolayaa cilladaha in laynoogu iyo qalab. Tani ma daboolo burburka uu keeno xadgudub, si xun u isticmaalka, dayacaad, shil, ama saaran gaadiid biyo. warranty Battery waa lix bilood.
Soo celinta iyo damaanad SHIPPING ALL :
Fadlan aad sanduuqa maraakiibta. warranty kuma jiraan dhaawac ka soo maraakiibta ee baakada ku filnayn.
HALISTA dhimasho ama dhaawac halis
Mar kasta waxaad kortaan guddiga Koowheel ah, waxaad halis dhimasho ama dhaawac halis ah ka soo gaartay of control, isku dhaceen, iyo dhaco. Si aad si ammaan ah fuulaan, waa in aad ka akhrisan iyo raacaan dhammaan digniinaha iyo tilmaamo in buuga.
Had iyo jeer xidho koofiyad marka fuushan. Ka fogow biyaha, meelaha qoyan, meelaha simbiriirixo / sinnayn, hills uga yaacday, gaadiidka, dildilaac, tareenka, quruurux, dhagaxyada, ama wax kasta oo caqabad ku keeni kara khasaare ah oo kala jar oo waxaan ka dhigi dhicid. Iska ilaali fardaha habeenkii, goobaha la aragti saboolka ah, iyo meelaha yar yar.
DIGNIIN: Ha kortaan guddiga Koowheel in deegaanno, on inclines, ama xawaare meesha aad ma noqon doono si nabad ah gacanta ku longboard ah unpowered. Haddii ay dhacdo in qalad batari interferenceor wireless, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay ku tiirsanaadaan barafka farsamooyinka sida footbraking ama saraysa si ay u joojiyaan.
DIGNIIN: Iska ilaali inaad biyo!
Your guddiga Koowheel ma aha caddayn biyaha. Tronics korontada, saa'idka, iyo waxyaalo kale oo la waxyeelayn kara. Waxyeellada biyaha oo aan la hoos damaanad ah.
DIGNIIN: POINTS noqanayaa!
Ka dhig faraha, timaha, iyo dhar ka suumanka, matoorrada, giraangiraha, iska iyo dhammaan qaybaha guuraya
DIGNIIN: HALISTA Koranto qabasho!
Ha furo ama faraha kula guryo korontada, kaas oo sidoo kale hulalka damaanad ah.
WAXAAD TAHAY KOOWHEEL: Fadlan masuuliyad kortaan iyo ixtiraamaan kuwa hareerahaaga ku wareegsan, oo labaduba ammaankaaga iyo si ay u caawiyaan kor our isboortiga cusub iyo hab of gaadiidka.